एमाले मिलाउन यस्तो गरिँदै ! - Dainik Online Dainik Online
एमाले मिलाउन यस्तो गरिँदै !
प्रकाशित मिति : ५ असार २०७८, शनिबार ८ : ३२
एमालेमा २०७५ जेठ २ मा फर्किने विषयमा मौखिक सहमति जुटेको छ। एकताका लागि अनौपचारिक वार्तामा संस्थापन र माधव नेपाल पक्षका नेताबीच भएको निरन्तर संवाद सहमति नजिक पुगेको हो।
नेपाल पक्षीय नेता भीम आचार्यले २०७५ जेठ २ मा सबै संरचना जाने विषयमा मौखिक सहमति जुटेको बताए। ‘कुनै धाँधली भएन भने अब पार्टी विभाजनबाट जोगिन्छ होला’, उनले भने, ‘यसलाई मिल्ने भाषामा कसरी लिपिबद्ध गर्ने छलफल भइरहेको छ।’
उनले सहमति टिक्नेरनटिक्नेमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इमान्दारीमा निर्भर रहने बताए। उनले सर्त राख्ने कुराले पनि निश्कर्षमा पुग्न केही ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिए। सर्वोच्चको मुद्दा, २०७५ जेठ ३ मा थपिएका ३८ केन्द्रीय सदस्य, २०७७ फागुन २८ मा थपिएका माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ नेताको विषयबारे सहमति जुट्न बाँकी छ। २०७५ जेठ २ सम्म एमालेमा २ सय ३ केन्द्रीय सदस्य थिए।
उनीहरूकै वार्ता र छलफलपछि प्रदेशमा एमाले एकता देखिन थालेको छ। प्रदेश १, बागमती र लुम्बनी प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि एकताबद्ध भएका छन्। शुक्रबार पनि दुवै पक्षका नेताबीच छलफल भएको छ। वार्तामा संस्थापन पक्षबाट सुवास नेम्बाङ र विष्णु पौडेल थिए। नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्ट थिए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।